Faaqidaadda Toddobaadka, 04 March 2018
Axad 4 March 2018
Faaqidaadda: Maqaamka Muqdisho
Dhageysatayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda Toddobaadka oo aannu ku eegi doonno maqaamka Muqdisho ay yeelaneyso.
Dhageyso Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka
Ku soo dhawaada markan barmaajikii Faaqidaadda Toddobaadka oo aan diiradda ku saareyno qulqulka tahriibka iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan dalka Libya.
Dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta xiiso gaar ah leh. Waxa soo jeedinaya soona diyaariyay Haaruun Macruuf.
Faaqidaada Todobaadka: Madasha Aragti-wadaaga Soomaalida
Barnaamijka Faaqidaada Todobaadka, wuxuu ku saabsanyahay todobaadkan, Shirka madasha aragti wadaaga Soomaalida ee todobaadkan ka dhacay dalka Jabuti.
Faaqidaadda: Muranka dekedda Boosaaso
Barn. Faaqidaadda: Korarka weerarrada Shabaab lagu hayo
Ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, oo aan maanta diiradda ku saareyno weerarada ka dhanka ah al-Shabaab oo kordhey. Mareykanka ayaa dhawaanahan duqeymo xooggan ka geysanayay Soomaaliya. Ma tahay kuwa Shabaab looga adkaan karo sidey hadda wax ku socdaan?